शाश्वत शर्मा -
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दुई दिने नेपाल भ्रमणको मिति जसैगरी नजिकिदैछ, उत्तिकै मात्रामा राजनीतिक बृत्तामा हल्लाखल्ला पनि जोरसोरले सुरु हुँदैछ । भ्रमणको मुख्य उद्देश्य जनकपुर, मुक्तिनाथको दर्शन भनेरब ताइए पनि गोप्य एजेण्डा हुनसक्नेमा कतिपयको निष्कर्ष छ ।
त्यसो त, एउटा ठूलो तप्का करीव एक महिना अघिमात्र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग दिल्लीमा वार्ता गरेका मोदीले करीव दुई हप्ता अघि चीनको बुहानमा राष्ट्रपति सी जिङ पिनसँग भेट गरे लगत्तै नेपालको धार्मिक भ्रमण गर्न के हतारो आइलाग्यो त ? कूटनीतिक बृत्तमा प्रश्न गम्भीर रहेको सुनिन्छ । विश्लेषकहरुका अनुसार मोदीको चीन भ्रमणमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग नेपालका बारेमा पनि कुरा भएको अनुमान गर्छन् । त्यसको प्रतिध्वनी सुनिने बताउँछन् ।
जेहोस्, भारतको विहार प्रान्तको पटनाबाट हेलिकोप्टरमा सिधै जनकपुर ओर्लिएर नागरिक अभिनन्दन ग्रहण गर्ने, रामजानकी मन्दिरको दर्शन गरेर प्रदेश नम्बर २ लाई विशेष सहायता घोषणा गरेपछि मुक्तिनाथ जाने र काठमाडौं आउन लागेका मोदीको यो कार्यक्रमलाई कतिपय विद्वानहरुले आशंकाको दृष्टिले हेर्न थालिएको छ । राम्रो मानिएको छैनन् । तिनका अनुसार पहिले काठमाडौं आएर अनिमात्र जनकपुर, मुक्तिनाथ जानुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन् । अझ जनकपुरमा नागरिक अभिन्दन गरेर नगरको साँचो अनि काठमाडैंमा पनि त्यही कार्यक्रम हुनुमा अधिकांश नेपाली, जो सचेत छन्को घोर आपत्ति देखिएको छ ।
खासगरी दुइवर्ष अघिको नाकावन्दीको घाउ आलै रहेको हुनाले यस्ता अनवान्टेड पाहुनालाई त्यस्तो तामझाम गर्नुपर्दैन भन्ने आवाज उठेको छ । अझ नेकपा माओवादीका मोहनविक्रम सिंह, मोहन बैद्यको आशयलाइृ बुझ्ने हो भने त मोदीलाई कालोमासो् दलेर लखेट्नु पर्छ भन्ने अतिवादी कुरासमेत रहेको छ । यिनीहरु मोदीलाई नेपालको मित्रशक्ति मान्न तैयार छैनन् । अर्थात यस अघि दुई पटक नेपाल भ्रमणमा आएका मोदीको नेपालमा समेत क्रेज घट्दो छ । २०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको नेपालको संविधानका विरुद्धमा उभिएकोमा एकथरि रुष्ट छन् भने अर्काथरि भूकम्पले थलथलिएको समयमा पनि नाकावन्दी लगाउनेलाई मित्र भन्न पनि अनुपयुक्त भनिरहेका छन् । नेपालमा आक्रोस बढ्दो छ ।
अझ दिनहुँजसो नेपाली भूभाग मिचेको, नेपालजस्तो सार्वभौम मुलुकलाई आफ्नो प्रान्तकोभन्दा पनि तल्लो स्तरमा झरेर व्यवहार गरेको, सँधै हेपाह चरीत्र प्रदर्शन गरेकोजस्ता पुराना आरोपहरुको त छिनोफानो बाँकी नै छ । १९५० कोसन्धि समयानुकूल बनाउने कुरा कहाँ गयो ? भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माणमा भारतले दिने भनिएको सहयोग कहाँसम्म आइपुग्यो, जबरजस्ती हड्पेर बसेको विभिन्न जलस्रोत र भौतिक निर्माणका आयोजनाहरुको अवस्था के हुने ? यस्ता कुराहरु त छुट्टै छन् । तर मोदी र ओलीका वीचमा यसरी तुरुन्तै भेट हुनुको मतलव छुट्टै छ भनेर शंकाहरु उठेका छन्, जुन नाजायज देखिदैन ।
खासगरी चीनको भ्रमण लगतत्तै नेपाल भ्रमणमा आउनुको खास महत्व हुनसक्छ भन्ने संशय हो । चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग छलफल गरेपछि नेपाल आएर के पासा फ्याँक्ने हुन् मोदीले ? त्यो भविष्यको गर्भमा छ । तर भन्न सकिन्छ कि यो पटकको भ्रमण मोदीको अत्यन्तै महत्वपूर्ण भ्रमण हो । केही हदसम्म तरङ्ग ल्याउने खालको भ्रमण हो । यसो भन्नेहरु अरुण तेश्रोको देखावटी रुपम सुरुआत गरेपनि २०७२ साल असार १० गते नेपालले आयोजना गरेको दाता सम्मेलनमा भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माण गतै २५ अर्व अनुदान र ७५ अर्व सहुलियत ऋण दिन्छु भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतसामु कबुल गरेको सहायताको अत्तोपत्ता नभएको र हुलाकी राजमार्गमा पनि ध्यान नदिएकाले कतिपय विश्लेषक भारतको हरेक काम उधारोमा दिने र नगदमा लिने फौबञ्जारको जस्तो छ भनिरहेका छन् ।
तैपनि पाहुनालाई स्वागत गर्ने नेपाली परम्परा रहेकाले दिल खोलेर हुन नसके मन मारेरै भए पनि भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको स्वागत गर्नैपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले चाहे भने सम्बन्धमा रहेका समस्याहरुको पोको फुकाउन सक्छन्, उनमा हिम्मत भए देखिने छ । ओली देशभक्तिमा उभिए भने ओली धेरै जनआस्था आर्जन गर्न सक्नेछन् । जनता नेपाल भारतवीचका सीमा अतिक्रमणदेखि सबै समस्यामा मोदीसँग खुलेरै वार्ता गर्न बल दिइरहेका देखिन्छन्